Igbe onyinye ojii na-eji mpempe akwụkwọ nchekwa Ribbon-Foldable
Igbe onyinye nke ọla edo
Igbe onyinye ojii
Black enweghị mmeghe ọ bụla, yabụ igbe igbe ojii na-ejikọ rịpọbọn. Ihe njiri mara mma ya na ezigbo ahụ zuru oke ga-amalite. Ọ dị mfe ịmeghe na mpịakọta. Igbe onyinye ọla edo nke eji edochi anya ihe anaghị enwe ike ịhụ ya. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ka gị na ndị gị na ha nọ nso mee ihe ncheta, echeghị na ị ga - ahọrọ ihe ọ bụla na - abụghị igbe onyinye ojii a. Zuru okè maka oge niile, ma obere ma nnukwu. N'ịchọ ịchikọta ọla aka maka onyinye agbamakwụkwọ ma ọ bụ ịchọ itinye pendant na yinye maka nri abalị, igbe a bụ naanị ihe ịchọrọ iji kechie onyinye dị oke ọnụ ahịa nke gị.
Igbe onyinye ejiri igwe ojii na-acha uhie uhie na rịbọn ahụ enweghị atụ maka ịhụnanya gị mana ọ ga - enyere aka igosipụta mmetụta gị nwayọ. Mee ka amara ihe anyi n’eme site n’inye onyinye gi anya eze n’ime igbe onyinye a. Mee ezigbo nhọrọ ma merie obi.
- Igbe onyinye
- Igbe onyinye onyinye dị mma
- Ngwunye onyinye ịchọ mma
- Igbe iko Mug
- Rigbe igbe
- Igbe mgbaaka
Mee ohere maka onyinye pụrụ iche n’ime igbe onyinye mpịachi ojii na rịbọn. Emechara nke ọma ka ị ghara ịchọ ihe ọ bụla ọzọ iji chọọ igbe ahụ mma. Chọta egwuregwu gị zuru oke maka onyinye ahụ zuru oke ma họrọ igbe onyinye ojii na ihe ọ bụla. Anya dị arọ na-adọrọ uche niile na ọmarịcha ihe osise enweghị atụ. Stkwado ọla edo bụ naanị mmetụ ahụ iji mezue izu-oke. Enwere ike iji igbe a mee ihe ọ bụla ma enwere ike gbanwee ya dịka ihe gị chọrọ. Anyị ga-ahụ na igbe gị ruru n’oge.